नेपाल आज | कठै ! हामीले हाम्रै सन्दिपको नाम पनि मोदीको मुखबाट सुन्नुपर्‍यो !(भिडियोसहित)
कठै ! हामीले हाम्रै सन्दिपको नाम पनि मोदीको मुखबाट सुन्नुपर्‍यो !(भिडियोसहित)
कुनै पार्टीको झोले होइन म
‘आदरणीय दिदीबहिनीहरु ठिक्क लुगा लगाउनुहस् जति शरिरले माग्छ
अलिअलि चास्सचुस्स त हामीलाई पनि हेर्न मन लाग्छ’
काठमाडौं । माथिको व्यंग्य कविताको हरफ हाँस्यकलाकार शैलेन्द्र सिंखडाको हो । महिलालाई सर्वाधिक व्यंग्य गर्ने कविमा पर्छन् उनी । तर उनको सर्वाधिक फ्यान फलोइङमा महिला नै बढि छन् । सिंखडा कविता लेख्न र वाचनमा मात्र हैन, निर्देशन, स्कृप्ट लेखन र कलाकारितामा पनि सक्रिय व्यक्ति हुन् ।
नाटकको विद्यार्थी भएर उनले कलाकारितामा प्रवेश गरेका थिए । विस २०३७ सालको जनमत संग्रहको समयमा उनले पहिलोपटक व्यंग्यात्मक कविता वाचन गरेका थिए । त्यहींबाट केही कविसँगको चिनजान बढ्दै गयो उनको । फलस्वरुप उनले कविता लेखनलाई पनि निरन्तरता दिन थाले । त्यसको परिणाम आज उनको हाँस्यव्यंग्य मिश्रित कविता नै देश विदेशमा सर्वाधिक बिक्छन् ।
उनी हाल मेला महोत्सव, विदेश प्रोग्राम र मिडिया हबको स्क्रिप्ट अध्ययनमा व्यस्त छन् । पहिला उनी नाटकका कालाकार हुन् । त्यसपछि लेखन मनप¥यो । लेख्न थाले पछि हाँस्य व्यंग्य आयो । उनले जीवनको जागिरको अवधिमा नाटक निर्देशन गरे ।
महिलालाई छोडेर उनी नेताहरूलाई सार्वधिक व्यंग्य कस्छन् । व्यंग्य गर्ने क्रममा उने धेरै धम्की पनि खानुपरेको छ । तर उनी निडर छन् । भन्छन्, ‘नागरिकको हैसियतमा भोट हाले पनि कुनै पार्टीको झण्डाको झोले बनेर हिँडेको छैन । त्यसकारण मलाई डर छैन ।’
आफ्नो हांस्यव्यंग्य कविता अनुहारको रुपान्तरणमात्र नभएर समाज रुपान्तरणमा बढी केन्द्रित हुने गरेको उनले बताए । यो वर्षको सिस्नुपानी देउसी भैलोमा उनको कवितालाई धेरैले मिस गरे । कतिपयले पोहोर साल निकै तिखो बोलेर यो वर्ष हटाइयो भन्ने अड्कल पनि काट्न पछि परेनन् । तर यस वर्ष आफू बेलायतमा भएको कारण उक्त कार्यक्रममा भाग लिन नसकेको उनले जिकिर गरे ।
केही दिन अघि र्याप गायक भिटेनलाई पोखरामा ढुंगा प्रहार भयो । यो सन्दर्भबारे प्रश्न गर्दा उनले पनि आफूलाई भएको यस्तै घटनाको बेलिविस्तार लगाए । पिके क्याम्पसलाई जनताको ससुराली भन्दा कुनै समय उनको कार्यालय नै घेराउमा पर्‍यो । सरकारले माफी माग्न लगाएपछि उनले क्याम्पसका सभापतिसँग कुरा गरे । आफ्नो तर्क राखेपछिमात्र माफी माग्ने सर्त राख्दै उनले क्याम्पस प्रमुखलाई भनेका थिए, ‘पिके क्याम्पसको ड्रेस लगाएर जताततै भेटिने हुँदा व्यंगयको बिम्बको रुपमा जनताको ससुराली भनेकोे हुँ ।’ पहिरनको कुरामा भनेको भनेर सभापतिलाई बताएपछि जुलुस फिर्ता गरिएको थियो ।
समाजका विभिन्न पक्षलाई व्यंग्य कस्ने उनले कवितामार्फत क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेको नामसमेत भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले लिइदिनुपर्ने भन्दै व्यंग्य गरेका छन् ।